को;रोना भाइरस : चीनमा ७६ हजार निको भए, अब २ हजारमा मात्रै सक्रिय ! – Khabarhouse
को;रोना भाइरस : चीनमा ७६ हजार निको भए, अब २ हजारमा मात्रै सक्रिय !
Khabar house | २० चैत्र २०७६, बिहीबार ०२:१९ | Comments
काठमाडौं, २० चैत । को;रोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनमा पछिल्लो लामो समयसम्म संक्रमण र मृ’त्यु दर न्यून रहेको छ । यूरोप तथा अमेरिकामा भ’यावह स्थिति आइरहँदा चीनमा भने अधिकांश संक्रमित निको भइसकेका छन् । वल्र्डो मिटर्सका अनुसार चीनमा अहिलेसम्म कुल ८१ हजार ५५४ जनामा काे;राेना भाइरसकाे संक्रमण देखा परेकाेमा ७६ हजार २३८ जना भने पूर्ण रूपमा निकाे भइसकेका छन् ।
त्यहाँ बुधबार जम्मा ३६ जना संक्रमित फेला परेका छन् भने ७ जनाकाे मृ’त्यु भएकाे छ। चीनमा हालसम्म काे;राेनाका कारण ३ हजार ३१२ जनाले ज्या’न गुमाएका छन्। अधिकांश संक्रमित निकाे भइसकेपछि त्यहाँ अब २ हजार ४ जनामा मात्रै काे;राेना भाइरस सक्रिय रहेकाे वर्ल्डाेमिटर्सकाे तथ्यांकले देखाउछ । तीमध्ये ग’म्भीर केस भने ४६६ जनामा रहेकाे छ ।
गत डिसेम्बरको अन्तिम सातातिर चीनकाे वुहान शहरमा पहिलाे पटक देखापरेको को;रोना भाइरस अहिले विश्वका सबै देशमा फैलिसकेकाे छ। चीनमा भने यसकाे म’हामारी नियन्त्रणमा रहेकाे बताइएकाे छ। उता यूराेपेली देश, अमेरिका र मध्यपूर्वका केही देशमा भने याे महामारी तीव्र फै’लिरहेकाे छ ।